Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Caldlor ivunyiwe kwi-Pre-Surgery Relief
I-Cumberland Pharmaceuticals Inc., inkampani ekhethekileyo yamayeza, namhlanje ibhengeze ukuba i-US Food and Drug Administration (i-FDA) ivume ukuleyibheli okwandisiweyo kwe-Caldolor®, ukuqulunqwa kwe-ibuprofen efakwe emithanjeni, ukubandakanya ukusetyenziswa kulawulo lwangaphambili.
Ileyibhile esandula ukuvunywa yi-FDA ibandakanya ulwazi malunga nezalathiso kunye nokusetyenziswa kwemveliso, inani elifanelekileyo lezigulane, iziphumo zophononongo lweklinikhi, iziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzeka, iinkcukacha zokhuseleko lwesigulane, kunye nemiyalelo yokusetyenziswa kwabasetyhini abakhulelweyo, abantwana kunye nabanye abantu.
Ukuxhasa oku kusetyenziswa okwandisiweyo kweCaldolor, uphando lweentlungu zokuhlinzwa zamathambo ziqinisekisile ukunciphisa intlungu xa imveliso ilawulwa rhoqo kwiiyure ezintandathu (yaqala ngaphambi kokusebenza) kunye ne-morphine eyongezelelweyo ekhoyo kwisiseko esifunekayo. Itotali yezigulane ze-185 zaye zanyangwa kunye ne-Cadolor® 800 mg okanye i-placebo elawulwa rhoqo kwiiyure ezintandathu (yaqala ngaphambi kokuhlinzwa) kunye ne-morphine enikezelwa ngokwesiseko esifunekayo.
Ukusebenza kubonakaliswe njengokunciphisa ngokwezibalo okubaluleke kakhulu ekunciphiseni intlungu kwiiyure ze-24 emva kokuhlinzwa kwizigulane eziphathwe ngeCaldlor® xa kuthelekiswa nalabo bafumana indawo ye-placebo.